Posted by Tranquillus | Mar 31, 2018 | Tababarka internetka
Raac tababarka si aad u kobciso dareenkaaga Elephorm
Elephorm waa goob ay bixiso koorsooyin interneet oo kala duwan oo diirada saaraya damaca digital. Dabcan, waxaa jira koorsooyin daboolaya mawduucyada dhiirrigelinta sida qaabeynta garaafka, qorista codka, qaabeynta ama fiidiyowga fiidiyowga. Thanks to platform ah interactive iyo ciyaaro iyo si fiican u fekeraan barashada video, arday kasta wuxuu kordhin karaa aqoontiisa xawaaraha macbudka.
Tanna iyada oo aan la siin dadaal yar. Ka dib, sida Confucius uu si caqligal ah u yiri: "Dooro shaqo adiga kuu daneynaya, mana aha inaad shaqeyso maalin keliya oo noloshaada ah". Tilmaamahan wuxuu ka tarjumayaa istaraatijiyada ganacsiga oo dhan ee Elephorm. Mashruucan wuxuu si aad u wayn ugu suurogeliyaa in aad karti u yeelatid xirfado muhiim u ah adduunka ee shaqada. Tani waa ku filan in la siiyo rajo dadka doonaya inay ku noolaadaan hamigooda.
MOOC ah oo loogu talagalay dhiirigelinta
Waxa Elephorm ka dhigaya MOOC meel aan u ekaan kuwa kale oo dhan ayaa ka sarreeya xaqiiqda ah in jacaylku yahay udub dhexaadka walaacyadiisa. Jeclow waxaad baratay, si aad u hubiso inaad fahanto. Sida laga soo xigtay hay'adda tababarka, tani waa fure u ah baridda tacliinta dhameystiran oo dareenka leh. Goobtu kaliya ma xoojinayso adiga xirfadaha kombiyuutarka adiga oo ku siinaya saboolnimo iyo waxyaabo aan caadi ahayn.
Macallimiintu sidoo kale way jecel yihiin. Iyo waxa ka sarreeya oo dhan, waxaa loogu talagalay dadka kale ee xiisaha u qaba. Sidaa darteed waxay ku hadlaan isku af! Isweydaarsigu waa barta adag ee Elephorm, taas oo sameysa wax kasta oo suurtagal ah si loo kordhiyo wadahadalka u dhexeeya ardayda iyo tababarayaasha. Sidaas ayaad uga faa'iideysaneysaa waxbarashada masaafada buuxda adigoon dhib u qabin go'doominta bulshada ee inta badan la xiriirta koorsooyinka elektaroonigga ah. Nimco aan caadi aheyn, markaad ogaato go'aaminta lagama maarmaanka u ah inaad tagto dhamaadka koorsada noocan ah.
Fasallo xiiso leh si ay u bartaan inay bartaan software badan
Haddii ay tahay barnaamijyada fiidiyowga wax laga beddelo (oo leh barnaamijka Adobe Premiere Pro) ama sawir-qaadista (oo leh daruuriyada CC-da CCTV-ga), waxaad heli doontaa koorsooyin kala duwan oo aad arki kartid wakhti kasta. Sidaa darteed, waxaad ku dhisi kartaa tababar tababar ah, oo ku habboon heerkulka si aad u barato software-ka ugu farsamo.
Dunida abuurista dhijitaalka ah kuma lahaan doonto wax sir ah adiga haddii aad qorsheyneyso inaad noqoto naqshadeeye garaaf, injineer cod, barnaamij sameeye ama xitaa tafatire muuqaal ah. Xirfadahaan rajo-gelinta leh waxaa lagu heli karaa tababarka ay bixiso Elephorm. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad bilowdo inaad xaqiijiso riyada ah inaad ku noolaato hamigaaga.
Tababbar fog oo aan lahayn caqabado
Barnaamijyada tababbarka ee fiidiyoowga ah ayaa laga heli karaa meel kasta oo ka socota xiriirka internetka. Sidaas darteed waa la heli karaa wakhti kasta. Sidan ayaad haysan kartaa dhammaan qaababka Elephorm iyada oo aan la xaddidin. Dhammaan buug-yare waxay xaqiijinayaan wadatashiyada aan xadidneyn.
Sidaa darteed waa fursad aad u fiican oo aad awood u leedahay in aad raacdo dhammaan koorasyada internetka oo aad xiiseyneyso inta badan wakhti kasta. Halis maaha hadda, in uu khalad ku jiro xulashada manhajka tan iyo markii aad isku dayi lahayd wax walba!
Habka aad kuugu kobcin lahayd aqoontaada meelaha aad xiiseyneyso
Waxbarasho dheeraad ah 40 000 waxaa laga helaa Elephorm. Waa fursado badan oo aad ku bilaabi karto bilawga meelaha aad ku dhiirigeliso. Ha ka baqin inaad siisid dareenkaaga dareenka ugu qoto dheer. Ka faa'iideyso tababarka gaarka ah sida ku qiyaasta dhadhanka iyo xiisahaaga. Yaa sheegay in barashada internetku aysan ahayn madadaalo?
Dhammaan xirfadaha aad kaamil u noqon karto Elephorm waxay muhiim u yihiin haddii aad leedahay nafta hal abuur leh. Koorasyada la bixiyay waxay dhab ahaantii faa'iido u yeelan karaan tiro fara badan oo ah xirfadaha. Horumarinta aqoontaada, marka lagu daro sahlan oo dhakhso ah, waxay kuu oggolaan kartaa inaad ku darto xirfado xiiso leh si aad u ballaariso resignkaaga.
Elephorm waxay kaa caawineysaa inaad sameyso xasuusta maroodiga dhabta ah!
Iyadoo la siinayo tababarka ugu muhiimsan ee xiisaha leh, Elephorm waxay qaadataa istiraatiijiyad ganacsi oo aan caadi ahayn. Halka MOOC kale ay diirada saaraan sidii aad ku qancin lahayd inaad shaqo hesho, Elephorm wuxuu diiradda saarayaa dhinaca dareenka ee barashada aad rabto inaad raacdo. Mashruucan wuxuu ku guulaystaa, marka laga reebo muuqaalka soo bandhigida fiidiyowyada dhamaystiran oo ku dhow.
Thanks to tayada waxbarashada pedagogiciga ah ee ay bixiyaan tababarayaasha, macluumaadka xajinta waxay noqotaa ciyaar cunug. Hubaal waxaad hubaal ka dhigan doontaa erayada ku haboon ee macalimiintaada barashada fiidiyooga. Haddii aad rabto in aad aqoon u leedahay sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, Elephorm wuxuu ku qancin doonaa 100%. Xajmiga buugiisa wuxuu ku siinayaa xulashada inaad ballaariso aqoontaada maaddo kasta oo u baahan in ugu yaraan hal-abuurnimo. Si dhakhso ah u tababar, si fudud, shaqada aad ku riyootaa.
Diiwaangelin dhamaystiran oo ah kharash yar
Haddii aad dooratid rukhsad bille ah si aad u tijaabiso adeegga, ama aad doorato qorshaha sanadlaha ah, ha ka baqin inaad gasho deyn aad ku maalgeliso waxbarashadaada. Kaliya waxay kuugu kacaysaa labaatan euro oo yar bishii. Qaddarkani wuxuu u muuqdaa mid aad u yar marka loo eego cabbirka buugga tababarka fiidiyowga ee Elephorm. Xusuusnow: tobanaan kun oo casharro ah ayaa laga heli karaa meel kasta iyo waqti kasta.
Qiimaha / tayada tayada ee mareegtu way adag tahay in la tartamo. Bixinta bilkasta waxay u oggolaaneysaa in ay tijaabiso sifooyinka kala duwan ee goobta. Tani waa inay tijaabiso tayada tababarka webka ee laga helo. Sidaa darteed waa xirmo aad u habboon haddii aad rabto in aad tijaabiso Elephorm si aad u xukuntid tayada koorsooyinkeeda, ka hor inta aadan ka fikirin ballanqaadyo dheeraada si aad uhesho dhamaan xirfadaha farsamada iyo hal-abuurka.
Samee Dareenkaada Ganacsiga leh Tababbarka Cadaaladda Video Janaayo 6th, 2020Tranquillus
horeRaac MOOC oo ku yaala Openclassroom si aad si dhaqso ah u kordhiso CV-gaaga
socdaMashruuca Voltaire wuxuu kuu qaadayaa tartanka Orthographic orestographic